CyberLink PowerDVD Ultra 3D 14.0. ~ မိုးညိုသား
CyberLink PowerDVD Ultra 3D 14.0.
1:15 AM pc software များ No comments
CyberLink PowerDVD Ultra 3D 14.0
လူတိုင်းကြိုက်တဲ့ Cyberlink PowerDVD နောက်ဆုံး update လေးကို ပြန်လည်မျှဝေခြင်ပါတယ်
PowerDvD လေးကို blu-ray player,HD player, နဲ့ 3D media player အတွက်
အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ အဆင့်မြှင့်ထားပါတယ်။ အသုံးပြု မယ် ဆိုရင် အောက် မှာဒေါင်း ပါ။
ဒေါင်းရန် - ( GOOGLE DRIVE ; ZIPPYSHARE )